Miyaa la damaanad qaadayaa badbaadada dhammaan jirka aluminium sida loo dayactiro |
Waxyaabaha aluminium ee loogu talagalay xawaaraha sare
Qalabka aluminium ee gawaarida
Cafinta aluminium ee dharka
Waxyaabaha Aluminium ee loogu talagalay mootada
Qalabka mashiinka otomaatiga
Waxyaabaha aluminium ee duulista
Aluminium warshad ah
Qalabka gawaarida fiilada
Daawaha aluminium ee aluminium
Miyaa amniga dhammaan aluminium jirka la damaanad qaadayaa sida loo dayactiro
Isticmaalka aluminium ee gawaarida ayaa muujinaya isbeddel sii kordhaya sanadba sanadka ka dambeeya. Waxaa jira noocyo badan oo isticmaala aluminium qayb ahaan ama gebi ahaanba. Nidaamka gudbinta gawaarida wuxuu adeegsadaa qaybaha aluminium, oo aan kaliya haysan xoog iyo adkaysi ku filan, laakiin sidoo kale leh kuleyl kuleyl wanaagsan. Xaqiiqooyinku waxay caddeeyeen in adeegsiga aluminium-ka baabuurta ay dhab ahaantii gaadhay faa'iidooyin bulsho iyo dhaqaale oo wanaagsan.
Aaladda aluminium ee gawaarida gawaarida
1, aluminiumku wuxuu keenaa faa'iidooyin qaabdhismeed, birta sidoo kale waa lama huraan
Sida la wada ogsoon yahay, marka la barbar dhigo birta caadiga ah, qalabka aluminium wuxuu sifiican u saadaalin karaa dhacdada isku dhaca bilowga naqshadeynta, iyo inuu hubiyo qaab dhismeedka iyo booska isku dhaca. Sidaa darteed, jirka aluminium wuxuu hagaajin karaa badbaadada gaariga illaa xad wuxuuna gaari karaa waxqabad ka wanaagsan tijaabada shilka.
Inkasta oo qaar ka mid ah xoogga waxsoosaarka ee aluminiumku ay gaari karaan wax ka badan 500-600 mpa iyo qaybo bir ah oo xoog badan, laakiin xoogaa muhiim ah, wali uma fiicna xoogga birta xoogga sare, sidaas darteed qaybo muhiim ah ayaa sidoo kale isticmaali doona xoojinta birta xoogga sare, sida jirka aluminium rover kala duwan, oo leh 4% bir xoog sare leh iyo 1% birta heerkulka-sare ee heer-kululeynta.
2, yaraynta miisaanka naaqusinta, xakamaynta amniga ilaa heer sare
Xaqiiqdii, badbaadada jirka aluminium kuma koobna oo keliya qaab dhismeedka iyo astaamaha maaddiga, laakiin sidoo kale door weyn ayey ka ciyaaraan baajinta iyo maaraynta gaariga. Gawaarida F-150 ee Ford, tusaale ahaan, culeyskiisu waa 318kg ka yar kii ka horreeyay sababtoo ah dhammaan aluminium jirkeeda. Firfircoonida gaariga ayaa si aad ah loo yareeyay masaafada bareega ayaa si weyn loo dhimay. Taasi waa sababta F-150 ay uga hesho darajada ugu sarreysa shanta xiddig amniga Qaranka Hay'adda Badbaadada Wadooyinka, taas oo siinaysa qiimeyn ammaan oo ka sarreysa moodooyinka la barbardhigi karo. Iyo sababta oo ah aluminiumku wuxuu leeyahay astaamaha u adkaysiga daxalka, waxay ku siin kartaa gaariga wareegga nolosha mid deggan.
Shuruudaha qalabka loogu talagalay dayactirka jirka aluminium
1. Mashiinka alxanka gaaska gaashaaman iyo mashiinka dayactirka qaab ee jirka aluminium
Sababtoo ah barta dhalaalka hoose ee aluminium, cilladaha fudud, shuruudaha alxanka ee hadda hooseeya, markaa waa inay isticmaalaan mashiinka alxanka jirka gaaska u gaashaaman. Mashiinka dayactirka qaabku ma noqon karo sida mashiinka dayactirka qaabka caadiga ah si aad u gujiso ama u sawirato, kaliya wuxuu isticmaali karaa aluminium qaas ah mashiinka mashiinka dayactirka mashiinka alxanka, iyadoo la adeegsanayo fidiyaha ciddiyaha muun si loo sawiro.
2. Qalabka aluminium ee gaarka u ah qalabka dayactirka jirka iyo qoryaha dillaaca ee xoogga leh
Way ka duwan tahay dayactirka gawaarida shilalka dhaqameed, hagaajinta jirka aluminium inta badan waa habka riveting, oo ay tahay inuu lahaado qori xoog leh. Iyo dayactirka qalabka jirka ee aluminium waa in loo heellan yahay, laguma qasi karo dayactirka qalabka jirka birta ah. Kadib hagaajinta jirka birta ah, bir duug ah ayaa looga tagi doonaa qalabka. Haddii loo isticmaalo in lagu hagaajiyo jirka aluminium, bir duug ah ayaa lagu dhejin doonaa dusha sare ee aluminiumka, taas oo keeneysa in aluminiumku u nuuro.
3. Nidaamka boodh ururinta iyo faakiyuumka ka hortagga qarax
Nidaamka nadiifinta jirka aluminium, waxaa jiri doona wax badan oo aluminium ah, budada aluminium waxyeello uma geysato jirka aadanaha oo keliya, laakiin sidoo kale olol iyo qarxis, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la helo boodh aan caddayn qarax iyo nidaam nadiifin dhuuqo budada aluminium waqtiga.
4. Meel dayactir madaxbanaan
Shuruudo adag awgood ee habka dayactirka jirka ee aluminium, si loo hubiyo tayada dayactirka iyo badbaadada hawlgalka dayactirka, si looga fogaado budada aluminium ee wasakheynta aqoon isweydaarsiga iyo qarxinta, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo xarun aluminium u gaar ah oo lagu hagaajiyo. Intaa waxaa sii dheer, shaqaalaha dayactirka jirka ee aluminium si ay u fuliyaan tababar xirfadeed, hantaan dayactirka habka dayactirka jirka ee aluminium, sida loo dhigo sawirka, alxanka, riveting, bonding iyo wixii la mid ah.
Ogsoonow hawlgalka dayactirka jirka ee aluminium
1, aluminiumka saxan aluminium silsiladaha maxalliga ahi ma fiicna, way fududahay in la dillaaco. Tusaale ahaan, maxaa yeelay qaabka saxanka gudaha ee mashiinka mashiinka ayaa ka dhib badan, si loo hagaajiyo waxqabadka qalloocsanaanta jirka inta lagu gudajiro soo saarida aluminium-awood sare leh, dheereynta ayaa dhaaftay 30%, marka dayactirka si loo hubiyo in qaabku aanu isbeddelayn inta suurtogalka ah, si looga fogaado dildilaaca.
2. Saxnaanta cabbirka ma sahlana in la fahmo, dib u soo celintana way adag tahay in la xakameeyo. Habka loo sii deynayo walbahaarka kuleylka heerkulka hooseeya waa in la qaataa sida ugu macquulsan ee dayactirka si looga dhigo mid xasilloon iyada oo aan la helin astaamaha isbeddelka labaad sida guga.
3, sababtoo ah aluminiumku wuu ka jilicsan yahay birta, isku dhaca iyo ku dhejinta boodhka kala duwan ee dayactirka waxay sababi doontaa qaybo waxyeelo dusha ah, xoqan iyo cillado kale ah, sidaa darteed waa lagama maarmaan in la fuliyo nadiifinta caaryada, nadiifinta qalabka, boodhka deegaanka, wasakheynta hawada iyo dhinacyada kale qaado tallaabooyin ku habboon si loo hubiyo sharafta qaybaha.
Sababtoo ah faa'iidooyinka waxqabadka u gaarka ah, aluminium aluminium ayaa aad iyo aad loogu isticmaalaa jirka gawaarida, amniga aluminium aluminium ayaa la xaqiijin karaa. Intaas waxaa sii dheer dayactirka jirka gaariga sidoo kale waa mid ku habboon, wixii faahfaahin dheeraad ah fadlan nala soo xiriir.
Waqtiga boostada: Nofeembar-01-2020